Mpanamboatra sy mpamatsy vola an'ny slip china | AOOD
Ny peratra fitetezana an-dranomasina dia azo noforonina tamin'ny habeny, hery ary isan'ny fomba maro samihafa, famatsiana herinaratra tsy misy fiatoana naoty avy amin'ny signal hatramin'ny 10.000V ary naoty ankehitriny hatramin'ny 500Amps. Ny borosy vita amin'ny takela-bolafotsy dia ampiasaina amin'ny boribory famantarana ary borosy grafitika volafotsy amin'ny peratra vita amin'ny vy vita amin'ny vy no ampiasaina amin'ny boriborintany ankehitriny. Ireo peratra fitetezana herinaratra ireo dia azo ampiarahina amin'ny tonon-taolana rotary fibre sy ny tsiranoka mihodina amin'ny tsiranoka mba hanomezana vahaolana mifanentana mihodinkodina ho an'ny fampiharana ambony na any ambanin'ny tany. Ny peratra fitondra an-dranomasina AOOD dia natao hiasa amin'ny tontolo an-dranomasina mahery.
Model Current Zintin'aratra Size (OD) Haingam-pandeha
R180 Max 7A isaky ny peratra
Max 100A tanteraka ankehitriny Max 1000VAC 72.4mm Max 100rpm
R176 Max 20A isaky ny peratra
Max 720A amin'izao fotoana izao Max 7200VAC 140mm Max 50rpm
Previous: Finger optic hybrid slip pirinty
Manaraka: Amin'ny alàlan'ny peratra bore slip